Qeybo ka mid ah ganacsiga suuqa Bakaaraha oo maanta dib loo furay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Qeybo ka mid ah ganacsiga suuqa Bakaaraha oo maanta dib loo furay
Waxaa maanta dib loo furay qeybo ka mid ah goobaha ganacsi ee ku yaalla suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kadib markii uu xirnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
Ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir oo ganacstada kale ku amray inay xiraan ganacsigooda ayaa keentay in suuqu shaqeyn waayay muddo labo maalmood ah, inkastoo ay haatan muuqato inaysan socon karin tallaabada ay ganasatada isku xayireen.
Waxyaabaha ugu waaweyn oo ay ganacsatadaasi ka cabanayaan ayaa waxaa ka mid ah canshuur kordhin ay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku sameeysay alaabaha aan daruuriga ahayn oo ay ganacsatadaasi kala soo degaan dekedda magaalada Muqdisho.
Illaa iyo haatan ma muuqato wax tanaasul ah oo ay wasaaradda maaliyadda sameeysay, waxayna wasaaradu ku adkeysaneysaa in canshuurta iibka ee ay soo rogtay uu yahay mid dalka uu ku dhismayo islamarkaana ay muhiim tahay in canshuurtaasi la bixiyo.
Dhinaca kale, ganacsatada gobolka Banaadir ayaa haatan raadinaya qaab kale oo loo xaliyo khilaafka kala dhaxeeya wasaaradda maaliyadda, iyagoo kulamo la yeelanaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Dekadda magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku xayiran alaab aad u badan, waxaana dekedda xeebteeda weli taagan maraakiib ay alaabo saaran yihiin.